Norway”Nin Leeb Iyo Qaanso Ku Nafta Kaga Jaray Shan Ruux | Berberatoday.com
Norway”Nin Leeb Iyo Qaanso Ku Nafta Kaga Jaray Shan Ruux
Norway(Berberatoday.com)-Afar qof oo dumar ah iyo mid rag ay ayaa ku dhimatay, laba qof oo kalena way ku dhaawacmeen ka dib weerar ka dhacay Norway oo loo adeegsaday qaanso iyo leeb.
Booliska ayaa abaare 18:13 waqtiga maxalliga ah waxaa la soo gaadhsiiyay warka weerrarka ka dhacay magaalada Kongsberg ee koonfur galbeed ka xigta magaalada caasimadda ah ee Oslo.
Nin u dhashay Demark oo 37 sano jir ah ayaa loo xidhay dhacdadaas oo booliska ay su’aalo waydiinayaan.
Booliska waxay sheegeen in dhowaan ay heleen dacwado ninkaas ka dhan ahaa oo la xidhiidha in laga cabsi qabay in uu xagjir noqday ka dib markii uu diinta Islaamka qaatay.
Booliska ayaa rumaysan inuu kaligii falkaas fuliyay, waxa ayna baadhi doonaan in falkaasi uu ahaa mid argagixiso, sida uu sheegay afhayeen.
Taliyaha Booliska Norway, Ole Bredrup Saeverud, oo shir jaraa’id qabtay ayaa sheegay in dhammaan dadka dhibaatada ay soo gaadhay ay da’ ahaan u kala dhexeeyaan 50 illaa 70 jirro.
Dhacdadaas waa mid “laga argagaxo”, ayay tiri Ra’iisul Wasaaraha Norway, Erna Solberg, taas oo hadashay saacado ka hor intii aysan xilka ka degin.
“Waan fahmayaa in dad badan ay baqayaan, balse waa muhiim in la sheego in booliska ay xakameynayaan hadda”, ayay tiri.
Waxaa la sheegay in ninkaas uu weerarka ka fuliyay gudaha dhismo laga dukaameysto oo ku yaalla dhanka Galbeed ee Kongsberg kaas oo lagu magacaabo Coop Extra. Dadka dhaawacmay waxaa ka mid ah askeri fasax uga maqnaa shaqada oo suuqaa ka adeeganayay.